कोभिड रोकथाम : सरकारको भर नपरौं, आफै बचौं - SindhuKhabar
गृहपृष्ठ ∕ विचार/अन्तरवार्ता ∕ कोभिड रोकथाम : सरकारको भर नपरौं, आफै बचौं
Sindhu Khabar आईतबार, २०७८ साउन २४ / १६:५५
दुई वर्षअघि विश्वव्यापी एकसाथ फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)ले नेपालमा समेत आक्रान्त पार्यो । धेरै संक्रमित भए । धेरैले ज्यान गुमाए ।
केही समय पछि फेरि नयाँ भेरियण्टसहितको नयाँ संक्रमण फेरि फेला पर्यो । अघिल्लोजस्तै यो भेरियण्टले पनि धेरैको ज्यान लियो । स्थिति भयावह बनायो । कोरोना नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयासहरु भए ।
तर, लकडाउन नै संक्रमण नियन्त्रणको प्रमुख आधार मानेर सरकार अगाडि बढि रह्यो । बढिरहेको छ ।
नेपालमा पनि आगामी असोजबाट तेस्रो लहरको कोरोना महामारी आउने अनुमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छ। देशमा दोस्रो लहरका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञा अझै पनि पूर्णरुपमा खुल्न सकेको छैन ।
कोरोनाको महामारी भित्रिएको डेढ बर्ष भन्दा बढि भएको छ, तर निषेधाज्ञा अझै पनि जारीनै रहेको छ ।
नेपालमा कोरोना भाईरस भित्रिदा सुरुमा २०७६ चैत्र ११ गतदेखि देशभर बन्दाबन्दी सुरु भएर २०७७ साउन ६ गतेसम्म कायम रहेको थियो। पूरै १२० दिन देश पूर्ण लकडाउनमा गएको थियो। २०७६ माघ ९ गते नेपाल अधिराज्यभर कोरोना भाईरस को पहिलो संक्रमण फेला परेको थियो।
सुरुमा नेपालमा लकडाउन गरेर खुल्ला गर्दासम्म देशभर १७ हजार ९९४ जनालाई कोरोना संक्रमण भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको थियो । खासमा नेपालमा कोरोनाको पहिलो लहरको लक डाउन अन्त्य गरेपछि सुरु भएको थियो । लकडाउनको समयमा नेपालमा संक्रमण सुस्त मात्रै देखिएको थियो ।
२०७८ को बैशाख देखि नेपालमा दोस्रो लहरको महामारी सुरु भयो । बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो ।पहिलो र दोस्रो लहर गरी अहिलेसम्म नेपालमा संक्रमितको संख्या शनिबार सम्म ७,१२,७४० रहेका छन ।अब नेपालमा आउने तेस्रो लहरमा बालबालिहरु बढी प्रभावित हुने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन्।
लामो समयदेखि निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दीको सामना गर्दै आएका नेपालीहरूले अब कहिल्यै पनि बन्दाबन्दीको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने चाहेका छन्। त्यसका लागि तेस्रो लहर आउनु अगावै विभिन्न तयारी गर्नुका साथै सबैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विद्हरूको भनाइ रहेको छ।
कोरोना महामारी आफ्नै व्यवहारका कारण फैलिने तिर सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोड दिँदै आएको छ ।
लकडाउन नगरी नियन्त्रण गर्न सम्भव छ त ?
वैशाखदेखि जारी भएको निषेधाज्ञा असार महिनाको दोस्रो सातादेखि खुकुलो पारिएको थियो। जब–जब नेपालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण बाहिर जान्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा जारी हुने गरेको छ ।
तेस्रो लहरको महामारी निषेधाज्ञा गरेर मात्र नियन्त्रणमा आउन नसक्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको ठम्याइ छ। लकडाउन नै नियन्त्रणको प्रमुख आधार मानेर सरकार अगाडि बढिरहेको छ।
महामारी नियन्त्रणका उपायहरू सहि तरिकाले मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। तर, यो उपाय मात्र पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन्
स्वास्थ्य सेवामा अवरोध खडा गर्ने सबैभन्दा ठूलो कारण लकडाउन हो।
नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण भन्दा मुटु र फोक्सोको रोग, मस्तिष्काघात र झाडा पखालाका कारण धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ। बन्दाबन्दीमा यस खालका बिरामीको मृत्यु हुने सम्भाव बढी हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा कडाइ
दोस्रो लहरको कोरोना भाईरसका कारण गरिएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा लापरवाही हुन थालेको छ। विशेषगरी राजनीति दलहरूले गर्ने विरोध प्रदर्शन, जुलुस, सभा लगायतका कारण कोरोनाको जोखिम बढिरहेको छ ।
दुई महिना अघिदेखि नेपालमा कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्ययादेश २०७८ जारी भएको छ। उक्त अध्यादेशले भीडभाड गर्न रोक लगाएको छ। यस्तो गरेको खण्डमा कारवाही हुने व्यवस्था छ।
कोरोना महामारीको कारण लकडाउनले प्रायजसो मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
यो जटिल अवस्थामा राज्यको अहम भूमिका छ। यो देशका जनताको कठिन परिस्थितिमा साथ कहिले नछोड्ने सपथ खाएका सरकारले जनतालाई लथालिङ्ग पार्न पाउदैनन्। सरकार हाम्रो राष्ट्रको अभिभावक हो। जनतालाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो।हालको समयमा स्वास्थ र शिक्षाको क्षेत्रलाई कसरी सन्तुलित तरिकाले लैजाने भनेर गम्भीर गृहकार्य गर्नु पर्ने कुरा अपरिहार्य देखिन्छ।
आफ्नो व्याक्तिगत स्वार्थमा नलागौं, आफू र सबैको ज्यान जोगाउनपट्टि लागौं! एकआपसमा दोष नदिई यस्तो जटिल अवस्थामा एकअर्कालाई साथ दिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
सरकारको निर्देशन पूर्णरुपले पालना गरौँ,
कोरानाबाट आफ्नो अनि सबैको ज्यान जोगाऔँ,
देशमा कोरोना को सङ्ख्या बढ्दै छ ..!!
सिटामोलको सुबिधा नभएको देशमा
अक्सिजनको आशा नगरौ, आफ्नो सुरक्षा आफै गरौ
पार्टीलाई बलियो बनाई मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्वको जरुरी
मेलम्ची : सम्हाली नसक्ने आसुको भेल बग्दैछ